Ny Huawei Watch GT sy Honor Watch voamarina any Eropa | Androidsis
Ny tsenan'ny smartwatch dia mitombo hatrany. Mitombo hatrany ny varotra an'ireny fitaovana ireny, noho izany dia manolo-tena handefa ny maodelin'izy ireo manokana eny an-tsena ireo marika. Famantaranandro vaovao roa no antenaina hihatra amin'ny magazay tsy ho ela. Izy io dia ny Huawei Watch GT sy ny Honor Watch. Ny famantaranandro roa an'ny marika sinoa dia efa voamarina.
Andrasana izany Ity Huawei Watch GT sy ny Honor Watch ity dia ho tonga eny an-tsena vetivety. Modely roa ampiasain'ny vondrona fiaviana sinoa hampitombo ny fisiany amin'ity sehatry ny tsena ity.
Huawei dia efa marika fahaefatra lafo vidy indrindra eran-tany. Ny orinasa dia mikatsaka ny hanohy ny fiakarana toerana amin'ny laharana, zavatra antenain'izy ireo ho tratrarina amin'ireo famantaranandro vaovao ireo. Samy efa nahazo ny mari-pahaizana EEC, amidy amin'ny kaontinanta Eropa.
Na dia nahazo an'ity fanamarinana ity aza izahay dia tsy afaka nahafantatra antsipirihany momba ireo Huawei Watch GT sy ny Honor Watch. Ny zava-drehetra dia manondro fa hampiasa Wear OS izy roa amin'ny maha rafitra miasa azy. Fanapahan-kevitra izay hampiroborobo an'ity kinova fanavaozana ny rafitra miasa ity.
Ny endrik'ireo famantaranandro misy ny marika sinoa dia mijanona ho tena tsy miovaova. Noho izany, tsy antenaina fa hanolotra endrika famakiana tany ny Huawei Watch GT sy ny Honor Watch. Izay andrasana ny vaovao sy ny fanatsarana dia ao amin'ny filazalazana azy. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy manana angon-drakitra momba izany izahay.
Mbola tsy manana fampisehoana na daty fandefasana ho an'ny Huawei Watch GT sy Honor Watch izahay. Azo aseho amin'ny 16 Oktobra izy ireo amin'ny hetsika famelabelarana ny Mate 20. Saingy tombantombana ity izay tsy voamarina hatreto. Manantena izahay fa hanambara bebe kokoa ny orinasa atsy ho atsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Watch GT sy Honor Watch dia voamarina
Ny Meizu 16X dia haseho amin'ny 19 septambra